Guqula amaphupho akho abe ngokoqobo isinyathelo ngesinyathelo
Engeza umbhalo nezithombe ekukhetheni okuningi kwemikhiqizo eyenziwe ngendlela oyifisayo nezipho eziqondene nawe ukuze uthole ukuthenga okukodwa okuphelele kunoma yisiphi isenzakalo.Kusukela kumasokisi angokwezifiso nezinkomishi ukuya emibhedeni yezinja efekethisiwe kanye nojosaka bezingane abaqondene nawe, ungenza ngokwezifiso noma yimuphi umkhiqizo onezinsuku ezibalulekile, okuqoshiwe, imilayezo esondelene, nezithombe eziyintandokazi.
Uma wenza ngendlela oyifisayo umkhiqizo ngamunye, ungaqiniseka ukuthi udala okuthile okuhlukile kwakho.Ngokufaka umlayezo okhethekile, izithombe zakho eziyintandokazi, noma into elula, njengegama lakho noma i-monogram - ungabonisa ukuthi uthathe isikhathi esengeziwe nomcabango ukwenza imikhiqizo yakho ibe nenjongo kuwe.
Esikhathini esedlule, amasevisi ethu enziwe ngokwezifiso imikhiqizo yosomabhizinisi abangu-3000+ Ungabheka ukwenza ngokwezifiso okujwayelekile ukuze uthole ugqozi.
·Sizohambisa idizayini yakho yomkhiqizo omusha kumkhiqizi ofanelekile ukuze akusize uguqule imibono yakho ibe imikhiqizo
·Sinokubambisana nabahlinzeki bekhwalithi ephezulu abangaphezu kuka-5,000, abakhulu nabancane, futhi amasevisi ethu angafanisa ngokushesha abahlinzeki abafanelekile ukuze kuqinisekiswe ukuthuthuka okusheshayo kwamathuluzi abrasi kanye nokukhiqizwa komkhiqizo.
·Ukupakishwa okukhangayo kuzophinde kunqume ukuthengiswa kokugcina komkhiqizo.Sinesipiliyoni seminyaka engu-19 enkonzweni futhi singenza ngendlela oyifisayo ukupakishwa komkhiqizo ngokushesha nangokunengqondo, ukuze imikhiqizo yakho izuze izinzuzo ezinkulu zemakethe.
·Ochwepheshe bethimba lethu banokuqonda okuphelele kwemithetho nezimiso zempahla esunguliwe ukuze zikusize ugweme ukwephulwa komthetho noma ukwephulwa komthetho.Uma kunesidingo, ithimba lethu linganikeza ukwesekwa kwezomthetho nganoma yisiphi isikhathi.
Dala Umkhiqizo Omusha
Yenza kube ngokwakho imaski ngedizayini yakho.Layisha izithombe zakho, engeza umbhalo, noma khetha eyodwa yemiklamo eyenziwe ngaphambilini - amathuba cishe awapheli.Kungakhathaliseki ukuthi ufuna uphawu lwencazelo yomuntu siqu, umlayezo omuhle ngezikhathi ezinzima, noma imaskhi efana nobuso bakho, siyakumboza.
Izinketho zokwakhiwa kwezikhwama ezithengiswayo nezikhangisayo zifaka phakathi ukukhetha kwendwangu yephaneli ngayinye, osayizi, izibambo, iziphuphu, ukudonsa uziphu, amaphakethe, izinketho ezihlukahlukene zokuphrinta ilogo nokubekwa ezindaweni zangaphandle nezangaphakathi okuhlanganisa isinyathelo nokuphinda.
Ukwenza kube ngokwakho kuyisici esibalulekile sokuwina umncintiswano wakho embonini yakho.Lokhu akusebenzi kusevisi yakho yamakhasimende kuphela kodwa nasezincekwini zakho zokumaketha nezokukhangisa.
Izinzuzo ezenziwe ngokwezifiso
Manje njengoba sekunezidingo ezengeziwe eziqondene nawe emakethe, noma ngabe isevisi ihlangabezana nalezi zidingo sekuyinto esemqoka;sebenzisa leli thuba futhi usebenze nathi ukuthuthukisa imikhiqizo efanele imakethe yakho ohlosiwe!
Uma ufuna ukuthi umugqa wakho wesikibha wangokwezifiso ushaywe, kufanele uhluke.Amahembe akho kufanele ahlukaniseke ngesithombe esingajwayelekile, esidonsa amehlo noma ngamagama ahehayo.Ngaphezu kwezikibha, ungaklama futhi udayise ama-sweatshirts, amajakhethi, ama-pullovers, amaphinifa, nanoma iyiphi enye into yokugqoka.
Ngeza Ukunethezeka Ekhaya Lakho Ngezingubo Zokulala Ezenziwe Okomuntu Sikho kanye Nemicamelo.Ingubo yangokwezifiso kanye nomcamelo wesithombe kwenza izipho ezinhle kakhulu zamalungu omndeni nabangane.Engeza izithombe zakho zomuntu siqu noma ilogo yebhizinisi.
Senza amasokisi angokwezifiso abe lula; Amasokisi ethu obuso ngokwezifiso namasokisi ezilwane ezifuywayo enza izipho eziphelele zanoma yisiphi isenzakalo.Vele ulayishe kalula isithombe sanoma ibuphi ubuso (somuntu noma esomngane wakho onoboya!) futhi udizayine owakho amasokisi ekhwalithi ephezulu, aqondene nawe.
Izambulela zokukhangisa zingesinye sezipho ezingcono kakhulu amakhasimende akho, abasebenzi, nanoma yiziphi izethameli, ezizozazisa ngempela.Thenga izambulela zangokwezifiso zekhwalithi ngentengo engcono kakhulu embonini.Thola izambulela eziphrintiwe zelogo - izambulela ezincane, ezinkulu, zegalofu, zolwandle nezenkundla.
Isevisi yomuntu siqu isho isevisi esheshayo futhi elula kakhulu.
Sinamakhono, ulwazi, ubungcweti kanye nezigxivizo zezobuchwepheshe zokukusiza ukufeza konke lokhu okungenhla, nokunye okuningi.
Unohlelo olwenziwe ngendlela oyifisayo